”ရွှေခေတ်မှာတောင် ရွှံ့စော်နံတယ်. . . | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ”ရွှေခေတ်မှာတောင် ရွှံ့စော်နံတယ်. . .	18
”ရွှေခေတ်မှာတောင် ရွှံ့စော်နံတယ်. . .
Posted by Thint Aye Yeik on Aug 1, 2015 in Creative Writing, History, Short Story | 18 comments
ကိုယ့်လက်ထဲက ကံကြမ္မာများ တခွမ်းခွမ်း ကျကွဲတဲ့ညကပေါ့ကွယ်…
နောက်ဆုံးမှာ… ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပျောက်ဆုံး…
ဟောဒီ – ခမ်းနားကြီးကျယ်လှပါသော အညတရလူသားရဲ့ မလှမပ-ညဆိုးများ…
အမှောင်မိုက်ဆုံးတိမ်တိုက်မှာတောင် ငွေရောင် အနားကွပ်လေး ရှိသေးသတဲ့…
ဟေ့အေး… အဲဒါက ကြည့်သောသူနှင့်သာ ဆိုင်ပါတယ်….
ငါလိုလူ ဤဇဗ္ဗူမှာ ထပ်မရှိနိုင်ဘူးရယ်လို့…
ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာသားတစ်ပိုဒ်အတိုင်း …
ဘဝဆိုတာကိုက လက်ဖက်ရည်ခွက်ထဲ ကျသွားရတဲ့ ယင်ကောင်လို…
ဝင်္ကပါသာ ဆန်ပြီး ထွက်ကမ္ဘာမဆန်ပါသော … လမ်းတချို့မှာ …
စိတ်ရင်းသာ ကောင်းပြီး စိတ်အဖျားမကောင်းသော လူတချို့နဲ့ …
အနံ့သာစစ်ပြီး အရသာမစစ်သော ကော်ဖီများသောက်ရင်း… လျှောက်ခဲ့ရတဲ့နေ့က…
ကိုယ့်ခြေထောက်ဟာ ကိုယ့်ကို သစ္စာဖောက်တယ်လို့… ခံစားရ…
ကိုယ့်အရိပ်ကတောင် ကိုယ့်ကို မနာလို – ”တို” ”ရှည်” ပြမှတော့….
ရွက်ဆုတ်ပြက္ခဒိန်လေးက မနက်ခင်းတိုင်းမှာ စကားတစ်ခွန်း ပြောတယ်…
ကိုယ့်ကို မရည်ရွယ်ဘူးဆိုပေမဲ့…. ကိုယ့်မှာတော့ တစ်နေ့တခြား ”ရိ”လာတယ်… ။
မြေကြီးထဲ ”အိ” ဝင်နေတဲ့ ကိုယ့်အခြေအနေကို ကိုယ်…
ကိုယ့်ဆီမှာ ကိုယ်မှ ရှိသေးရဲ့လားလို့…
ကိုယ့်တစ်ယောက်ထဲ ညာ ညှိကြည့်ရတော့တာပေါ့…
”လူနံပါတ် ၁၈၉၈၇ ၊ မောင်သူရ ”
(ဖြေသံ မကြားရ… )
(ကိုယ်ဟာ ကိုယ်နဲ့ နီးလွန်းသူမို့
ကိုယ့်အမေးကိုကိုယ် ချက်ချင်းမကြား ၊ ချက်ချင်း မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူး။
ကိုယ့်ဘယ်ဘက်မျက်လုံးက ကိုယ့်ညာဘက်မျက်လုံးကို နီးကပ်လျက်နဲ့ လှမ်း မမြင်ရသလိုမျိုး…)
(အကြာကြီး ကြာပြီးလေသောအခါမှ…. တိုးတိတ်နွမ်းလျ …ဖြေဆိုသံတစ်စ..
”လူနံပါတ် ၁၈၉၈၇၊ မောင်သူရ – ရှိ”
ကိုယ်ရေးတဲ့ ကိုယ့်သမိုင်း… နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ အောက်နားဆီမှာ…
ကိုယ့်နာမည်လေး စာနှစ်လုံးကို – ပြုံးပြုံးလေး စီရီ သီကုံးသွားနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး…
၂၈ ၊ ဇူလိုင် ၊ ၂၀၁၅
Ma Ma says: အကြောင်းအရာရော အရေးအသားပါကာင်းတယ်။
စာရေးသူရဲ့ခံစားချက်ကို စာဖတ်သူစိတ်ထဲရောက်အောင် ဖွဲ့နွဲ့နိုင်ပါပေတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
Alinsett @ Maung Thura says: .ကောင်းတယ် ဆိုလို့
ကိုယ့်လက် ကိုယ် ရွှေချလိုက်ချင်ပြီ။
ရွှံ့စော်တော့ နည်းနည်း နံနေသေးတယ်ထင်
ဖတ်ရှု အားပေးသွားတဲ့ ချစ်သောအန်တီမမကိုလည်း ကျေးဇူးပါဗျားးး
YE YINT HLAING says: ရုန်းရင်းကန်ရင်းချိုမြိန်လိုက်ရတာ…
ဗြိ ရိ အိ သိ …
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ့ဒီ ဗြိ ရိ အိ သိ အပိုဒ်ကို အချိန်ခပ်ကြာကြာ ရေးခဲ့ရ။
.တွေးမိတာကို ချရေးဖို့ စကားလုံး ရှာရင်း နာရီအတော်ကြာာာာ
မြစပဲရိုး says: လူ နံပါတ် ၁၂၉၀၁၃ – ပရဲဆင့် တီချာ
until ……. when? :-)))
Alinsett @ Maung Thura says: ”ရှိ”လား
အဲ့ဒီလူနံပါတ်ကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုပါလိမ့်လို့ တွေးနေမိ
kai says: အားနဲ့မာန်နဲ့.. ရှိ လို့..အော်ထည့်လိုက်ပါကိုရင်ရယ်…
တချို့ကိစ္စတွေက.. လိုတာထက်တောင် အော်ရသေးတာ..။
Alinsett @ Maung Thura says: တစ်ခုခု ပေးမယ်ဆိုရင်တောင်
လှမ်းယူနိုင်မယ့်အင်အားလေး အရင်ပေးပါ လို့
ဆန္ဒပြုနေရတဲ့ ဘဝတွေ . . .
ဘယ်လို လုပ်မလဲ. . .
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စိတ်ရင်းသာ ကောင်းပြီး စိတ်အဖျားမကောင်းသော လူတချို့နဲ့ …
Alinsett @ Maung Thura says: လာရောက် ဖတ်ရှုသွားတဲ့ လေးပေါက်ကိုလည်း ဇူးဇူးပါခင်ဗျ။
ဒီပိုစ့်ထဲက comment တွေကို
စိတ်လိုလက်ရ ထိုင်ပြီး အချိန်ပေးကာ နီနီရဲစေရှာသူအားလည်း
ဦးကြောင်ကြီး says: ဝှက်ဖဲ
Alinsett @ Maung Thura says: အာ့ ဘာဖျစ်သာလဲ
အောင် မိုးသူ says: ရွှေခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးကွယ့် မောင်ဒညင်းရဲ့
Alinsett @ Maung Thura says: အခုလောလောဆယ်တော့ ရွှံ့ခေတ် ဖြစ်နေပြီ
တစ်တိုင်းပြည်လုံးလည်း ရွှံ့စော်ကို နံလို့ နစ်လို့
ဇီဇီခင်ဇော် says: စိန်ခေတ်ကျတော့ ချေးစော်နံတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: နှိုင်းပါနဲ့… .ချေး သိက္ခာတောင် ကျသေး…
manawphyulay says: လူနံပတ်တောင် မနည်းမှတ်ထားရမယ်…
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ့လူနံပါတ်က… အမှန်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.